Burmese Techie, Author at Burmese Techie
Ransomware ဆိုတာဟာ အခုခေတ်မှာ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး malware ဖြစ်ပါတယ်။ Ransomware အလုပ်လုပ်ပုံဟာ စက်ထဲက ဖိုင်တွေအားလုံးကို encrypt ပြုလုပ်ပြီး Decrypt ပြန်လုပ်တဲ့ Key လိုချင်ရင် ပိုက်ဆံပေးပါဆိုပြီး စာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပိုက်ဆံပေးလိုက်လည်း key ပြန်မရတတ်ပါဘူး။ Ransomware တွေကို Windows စက်တွေမှာသာ အများဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အခုအခါ MacOS မှာပါ တွေ့ရှိနေရပါပြီ။ EvilQuest ransomware ကို ရုရှားဖိုရမ်တစ်ခုက LittleSnitch ဆိုတဲ့ Pirate	...
Bugs & Fix July 1, 2020 July 1, 2020
The Anti-Defamation League, the NAACP တို့ က ဦးဆောင်ပြီး ဇူလိုင်လကစပြီး Facebook နဲ့ Instagram မှာ ကြော်ငြာထည့်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းဖို့ Stop Hate For Profit ဆိုတဲ့ Campaign ကို ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Campaign ကို Honda, Viber, Adidas အစရှိတဲ့ company ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က ပါဝင်ထားကြပါတယ်။ ADL အဖွဲ့က Facebook ပေါ်က အမုန်းတရားတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့၊	...
Editors' Picks Facebook Home Slider Social Media July 1, 2020 July 1, 2020
Google Search ထဲမှာ Augmented Reality လို့ ခေါ်တဲ့ AR နည်းပညာနဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ၊ တချို့ အရာဝတ္ထုတွေကို 3D နဲ့ ကြည့်လို့ရအောင် မနှစ်က စတင် ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ AR နည်းပညာနဲ့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကင်မရာကနေတစ်ဆင့် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို အပြင်လောကထဲကို ခေါ်ကြည့်လို့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google အနေနဲ့ 3D ကြည့်လို့ ရမယ့် တိရိစ္ဆာန်စာရင်းကို တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့ပေးလာတာ အခုဆိုရင် ဒိုင်နိုဆောပါ ပါဝင်လာပါပြီ။ ဒိုင်နိုင်ဆောတစ်ကောင်ကို အပြင်လောကထဲ	...
Google June 30, 2020 June 30, 2020
အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်ကြား နှစ်နိုင်ငံ တင်းမာမှုတွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် apps ၅၉ ခုကို အန္တရာယ်ရှိ app များအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဟာ နည်းပညာ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ 69A အရ ခွင့်ပြုထားတဲ့ အခွင့်အာဏာကို အသုံးပြုပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာအတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပိတ်ပင်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ အဆိုပါ app တွေဟာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ပြင်ပဆာဗာထံသို့ တရားမဝင်	...
Mobile App June 30, 2020 June 30, 2020
Apple က ရောင်းချမယ့် iPhone 12 မှာ နားကြပ်နဲ့ charger ပါဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လေ့လာသူတွေက ပြောဆိုပါတယ်။ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေက အစဦးပိုင်းမှာ နားကြပ် မပါဝင်နိုင်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းထားကြပြီး အခုအခါမှာတော့ နားကြပ်အပြင် charger ကိုပါ သီးသန့်ဝယ်ယူရနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Apple နှင့် ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်သူ Kuo က Apple ဟာ iPhone 12 ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို iPhone 11 နဲ့ သိပ်မကွာစေလိုတာကြောင့် အခုလို	...
Apple June 29, 2020 June 29, 2020
Facebook က အချို့သော iOS user တွေအတွက် dark mode ကို ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ Social Media today ကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အသုံးပြုသူအနည်းငယ်ကိုသာ စတင်ထုတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Image - @NotFridayCraig's twitter Facebook dark mode ရရှိထားတဲ့ iOS အသုံးပြုသူအချို့ကလည်း twitter မှာ ပြန်လည် မျှဝေထားကြပြီး dark mode ရရှိဖို့ iOS 14 ဖြစ်ဖို့ လိုမလိုဆိုတာ	...
Facebook June 28, 2020 June 28, 2020
Apple က iOS 14 ရဲ့လုံခြုံရေးနည်းပညာအသစ်ကို ထည့်သွင်းပေးပြီးနောက်မှာ ဖုန်းရဲ့ clipboard ကို ရယူနေတဲ့ app တွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ clipboard ဆိုတာ ကိုယ်က တစ်ခုခုကို copy ကူးလိုက်ရင် ပြန်ပြီး paste လုပ်နိုင်အောင် နောက်ကွယ်က မှတ်သားထားပေးတဲ့ နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ Okay so TikTok is grabbing the contents of my clipboard every 1-3 keystrokes. iOS	...
Social Media June 28, 2020 June 28, 2020
Microsoft ဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ​ ရှိတဲ့ လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေကို ပိတ်ပြီး အွန်လိုင်းကနေသာ ရောင်းချတော့မယ်လို့ သောကြာနေ့က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နေရာလေးခုမှာ စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့သာ ထားရှိပေးတော့မှာ ဖြစ်ပြီး online store အနေနဲ့သာ ဆက်လက်ရောင်းချသွားမှာပါ။ အဆိုပါ ကြေညာချက်အရ Pandemic ကာလ ပိတ်ထားရတဲ့ Microsoft store ပေါင်း တစ်ရာနီးပါးဟာ ပြန်ဖွင့်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့ ထားပေးမယ့် လေးနေရာကတော့ လန်ဒန်၊ နယူးယောက်၊ Sydney နဲ့ ဝါရှင်တန်က Microsoft ရုံးချုပ်တို့ပဲ​ဖြစ်ပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့	...
Microsoft June 27, 2020 June 27, 2020
ဟိုတလောက အင်တာနက် မလိုပဲ​ ဆော့လို့ရမယ့် offline games လေးတွေ ရွေးပေးပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မှာ အချိန်ဖြုန်းဖို့ ဂိမ်းကောင်းကောင်းလေးတွေ ထပ်ရွေးပေးချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ offline ဆော့လို့ရတာရော၊ online ဆော့ရမှာရော ပါပါမယ်။ Clash RoyalePES 2020 eFootballBus Simulator UltimateFlick Shoot21. Clash Royale Supercell ရဲ့ Clash of Clans (COC) ဟာ တချိန်က	...
Gaming Mobile Mobile App June 26, 2020 June 26, 2020
Google Photos ဆိုတာ ဖုန်းသုံးတဲ့လူတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ application တစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် High Quality Photos တွေကို unlimited storage နဲ့ သိမ်းပေးလို့ လူကြိုက်များလှပါတယ်။ Picasa ကနေ နာမည်ပြောင်းပြီး ငါးနှစ်သက်တမ်းထဲ ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ Google Photos ကို logo အသစ်၊ ဒီဇိုင်းအသစ်တွေအပြင် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့ update ရရှိနိုင်တော့မှာပါ။ Logo အသစ် Image - google Google Photos ရဲ့ logo	...
Google June 26, 2020 June 26, 2020